Gianluigi Buffon oo shaaciyey Xiddiga ka badali doona booskiisa? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Gianluigi Buffon oo shaaciyey Xiddiga ka badali doona booskiisa?
Goolhayaha kooxda kubada Cagta Juventus iyo Xulka qaranka Talyaaniga Gianluigi Buffon ayaa shaaca ka qaaday ama Magacaabay Cayaaryahanka badali doona marka uu ka fariisto Cayaarta kubada Cagta oo uu in badan ku soo dhex jirey.
Gianluigi Buffon oo ah Goolhaye in badan ka soo muuqanayey Garoomada ayaa sheegay in Xiddiga AC Milan ee Gigio Donnarumma uu yahay Cayaaryahanka buuxin doona booskiisa Xulka Talyaaniga kaas oo uu ku amaanay qaab Cayaareedka layaabka leh ee uu soo bandhigay xili uu aad u da.yaryahay.
Buffon oo Waraysi siiyey Wargeyska Copa90.ayaa sidoo kale Cadeeyey in marka uu dhamaado koobka aduunka 2018 uu ka fariisan doono Cayaarta kubada Cagta isla Markaana uu xilkiisa ku Wareejin doono Goolhaye Gigio Donnarumma.
Ninkaan oo 40 Sano jirsan doona Goordhow ayaa laweydiiyey Goolhaye yaasha uu daawado ee uu Jecelyahay qaab Cayaareedkooda kuwaas oo uu ku sheegay in ay kala yihiin [Jan] Oblak, [Hugo] Lloris, [Samir] Handanovic, Alisson, [Wojciech] Szczesny, [Joe] Hart…